Cleaning torohevitra - Ningbo BestCleaner Co., Ltd
BVC madio kokoa hanampy anao hanao BBQ antoko tsy matahotra ny asa madio.
Manana namana maro sy te-gaga azy ireo, nahoana no tsy gaga izy ireo tamin'ny fampiantranoana ny BBQ fety? Aza avela ny mahafantatra ny korontana trano mahazo an-dalana ny mankafy ny fotoana niaraka tamin'ny namana tsara. Ity ny 5 dingana drafitra mba hanampy anao manadio an-tranonao - tsy misy adin-tsaina, vao mora-to-hanatratra asa. Ary aiza no manomboka? Fa ny BBQ antoko, ny vahiny dia mandany ny fotoana ny ankamaroan'ny any ivelany, toy izany koa ny manan-danja indrindra mba hanadio faritra ao an-trano no fidirana, efitrano fandraisam-bahiny, lakozia sy ny efitra fandroana. Tsy ilaina ny manadio ny trano iray manontolo fa mifantoka amin'ny antoko lalana - ny sain'ny ankamaroan'ny olona ho amin'ny latabatra, talantalana sy ny toerana mba hametraka ny zava-pisotro.
Ny zavatra voalohany dia hahita ny vahiny no fidirana noho izany dia tena ilaina mba hanao tsara ny Fiheveran'ny Olona Ahy. Ve ny hamafa haingana ivelany, hatao manaisotra ny loto rehetra. Avy eo manao ny lalanao ao anatiny sy manao ny hamafa manodidina ny efitrano fidirana, fanesorana izay manangona sy ny fametrahana kiraro, palitao, satroka sy ny namany Sary avy eo imasony. Vovoka tamin'ny latabatra na ny haingon-trano sy ny zavatra Mitifitra deodoriser ny sasany.
Aloha maka toerana na avy amin'ny zavatra, nanitsy fandriana, cushions, ondana sy ny refolding mandroaka ny (lehibe mba hamitana ny misy stains - Na izany aza dia tsy mila manao izany rehefa mampiasa akory va ny BVC vokatra). Manaraka manadio ny latabatra, TV lamba feno vovoka sy ny faritra amin'ny alalan'ny fampiasana ny microfiber lamba. Farany, misy banga ny vovoka na biby volo teo amin'ny tany, ary aza adino ny manadio ny zana-kazo skirting mampiasa ny vacuum Hose ny borosy na ny miraiki-po.
4.Clean ny Kitchen
Hevitra ny fanafihana voalohany dia ny manomboka manamarina ny hilatsaka na sakafo maloto; raha manana fanasana vilia fotsiny omeo hosasany sy niisa azy. dia manome ny hilatsaka tsara fanadiovana - dia tokony ho tsy misy pentina, shimmering tavy rehefa nahavita ianao - ny BVC madio dia hanao izay hahazoany manao io asa mora kokoa! Next manadio ny mifanohitra tampon, entana tsy ilaina lasa fitaovana sy hamafa ny latabatra teo amin'ny dipoavatra dakozia sy ny microfiber fanary lamba na mamafa. Afaka manao toy izany koa ho an'ny fatana, cabinets sy anaty vata fampangatsiahana. Mety ihany koa ho hevitra tsara mba hanadio ny anaty vata fampangatsiahana anatiny, rearranging mba hanaovana toerana ho an'ny appetisers, zava-pisotro sy ny hafa goodies. Farany, etona MOP ny gorodona mba hahazoana antoka ny dakozia dia spick sy ny androm.
5.Last fa tsy zavatra tena madio ny Bathroom Fitoerana Masina
Mandao ny toerana ho manan-danja indrindra farany - ny efitra fandroana dia ny efitrano tokony hifantoka indrindra amin'ny saina on. Ary izao akory tsy midika tsy maintsy midina eo amin'ny tanana sy ny handohalika sy kirihitra ny tany, fa ny marimarina kokoa, ny zavatra manadio vahiny indrindra dia ampiasaina toy ny kabine, fitaratra, hilentehan'i sy ny mifanohitra. Nampirina entana miala aloha countertop zavatra rehetra nania ho cabinets, na aiza na aiza amin'ny fahitana, nanaraka ny fanomezana ny hilentehan'i countertop ary taratry ny fanadiovana tsara miaraka amin'ny tanjona madio rehetra-na ny BVC madio kokoa. Next manadio ny trano fidiovana - anatiny, teo amin'ny seza, sisiny sy ny ivelany, ary ho azo antoka anao hisolo ny horonan-taratasy efa misy trano fidiovana amin'ny vaovao iray. Add sasany deodoriser na labozia manitra mba hamorona ny Spa fihetseham-po. Ary aza adino ny mametraka ny vaovao, tanana madio sy malefaka towels avy. Farany, manome ny fidiovana tany tsara sy ny etona MOP rehetra nataonao ianao.
Fa mora toy izany miaraka amin'ny 5 dingana drafitra - aza avela fanadiovana mahazo an-dalana ny antoko Prep fotoana.